အပြာစာပေ၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရှုထောင့် (2019) - သင့် ဦး နှောက်သည်သင်၏ ဦး နှောက်
ဂျော့ခ်ျ, Manju, Shreemit Maheshwari, Suhas Chandran နှင့် TS Sathyanarayana Rao က။
Psychosexual ကျန်းမာရေးဂျာနယ် 1 မရှိ။ 1 (2019): 44-47 ။
နိဒါန်း: ညစ်ညမ်း relational ရငျးနှီးမှုအတွက်မဆိုလိုအပ်ချက်များမပါဘဲ Non-relational လိင်ဘို့ပေးတော်မူသောအသုံးအနှုန်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာရာစုနှစ်များစွာကျော်အားလုံးယဉ်ကျေးမှုနှင့်ယဉ်ကျေးမှု၌ထငျရှားခဲ့သညျ။ အင်တာနက်ပေါ်ရှိစွဲလမ်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေ၏ဧရိယာသို့သုတေသန compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူပတျဝနျးကငျြအမျိုးမျိုးသောဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းထည့်သွင်း။
ညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်လူ့အဖွဲ့အစည်း: ညစ်ညမ်း၏ပိုလျှံကြည့်ရှုထိုကဲ့သို့သောစိုးရိမ်စိတ်များနှင့်စိတ်ကျဝေဒနာနှင့်ပင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုအဖြစ်စိတ်ရောဂါ comorbidities နှင့်ဆက်စပ်ခံရဖို့ကဆိုပါတယ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ညစ်ညမ်းစွဲနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီ, အကငျြ့ပြဿနာများ, ဆိုးသွမ်းအပြုအမူများပိုမိုမြင့်မားအဆင့်ဆင့်, စိတ်ကျရောဂါလက္ခဏာတွေမြင့်မားဖြစ်ပွားမှုများတွင်တိုးလူမှုရေးပေါင်းစည်းမှု၏အနိမ့်ဒီဂရီရှိသည်, စောင့်ရှောက်သူများနှင့်အတူစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ Bond လျော့နည်းသွားသည်။ ညစ်ညမ်းစိတ်ကူးယဉ်ထားတဲ့စကားရပ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးဦးနှောက်အပျြောအပါးစင်တာများ rewire နှင့်အဆောက်အဦများနှင့် function ကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်အလားအလာရှိသည်ဟုဆိုသည်။
နိဂုံး: ညစ်ညမ်းအတွင်းမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုတွင်တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်အရာကိုအလားတူဦးနှောက်အတွက်သိသာထင်ရှားသောအပြောင်းအလဲများကိုဆောင်ကြဉ်းပေးနိုင်သည်။ နည်းပညာနှင့်ထိုကဲ့သို့သောပစ္စည်းရန်လွယ်ကူလက်လှမ်း၏စန်းမှမရှိစေရန်, ကညစ်ညမ်း၏ဆိုးရွားသောသက်ရောက်မှုများနှင့် ပတ်သက်. ကျောင်းသားကျောင်းသူများပညာပေးရန်အထူးဒီဇိုင်းညစ်ညမ်းစွဲပညာရေးအစီအစဉ်များကိုပေးအလွန်အရေးကြီးသည်။
keywords ဝတ်လစ်စလစ်ရုပ်ရေးခြွယ်ခြင်း, ညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရငျးနှီး, စွဲခြင်းရောဂါ, မြီးကောင်ပေါက်နှင့်ညစ်ညမ်း, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ်
အဆိုပါစကားလုံး "ညစ်ညမ်း" ဆိုလိုတာကဂရိစကားလုံးကနေသူ့ရဲ့မူရင်းကြာ "ပြည်တန်ဆာအကြောင်းကိုရေးသား။ " ညစ်ညမ်းတွင်ဖော်ပြပါရှိသည်အဆိုပါအမျိုးသမီးကသူတို့ရဲ့မိတ်ဖက်နှအဖြစ်လကျအောကျခံပြသခြင်းနှင့်၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်အပျော်အပါးအာရုံစိုက်ကြသည်မဟုတ်။ အဆိုပါအသုံးအနှုန်းဟာလုပ်ရပ်အတွက်မိတ်ဖက်နှစ်ဦးစလုံးကိုတစ်ပြိုင်နက်တည်းမိမိတို့၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဇာတ်ခံစားဤသို့ကာမဂုဏ်အပေါ်သိသာအာရုံစိုက်ပေးထားတဲ့အတွက်အသုံးအနှုန်းကိုရည်ညွှန်းထားတဲ့ "erotica" ကိုဆနျ့ကငျြဘ၌တည်ရှိ၏။1 ညစ်ညမ်းစာအုပ်တွေ, မဂ္ဂဇင်းတွေ, ရေးဆွဲ, ဗီဒီယိုများ, နှင့်ဗီဒီယိုဂိမ်းကစားပါဝင်သောအမျိုးမျိုးသောနည်းလမ်းများသုံးပြီးလိင်စိတ်နိုးထ၏ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်လိင်ကိစ္စဘာသာရပ်ကိစ္စ၏သရုပ်ဖော်အဖြစ်သတ်မှတ်ထားသည်။ သည်အခြားအသုံးအနှုန်းများအတွက်ကလုပ်ရပ်များ၏ပုံဖော်တင်ဆက်ထက်လုပ်ရပ်ကိုယ်နှိုက်သည်။ ပေတရုနှင့် Valkenburg အဖြစ်ပညာရှင်ပီသစွာဆင်းသက်လာသို့မဟုတ်လိင်ကိုကြည့်ရှုသူများကိုနှိုးဆှရည်ရွယ်အသုံးပြုသူ-generated ရုပ်ပုံများသို့မဟုတ်ဗွီဒီယိုများ (ကလစ်ပ်) ညစ်ညမ်းသတ်မှတ်ပါတယ်။ ဤရွေ့ကားဗီဒီယိုများနှင့်ထိုကဲ့သို့သောမကြာခဏလိင်အင်္ဂါပေါ်တွင် close-up နဲ့ unconcealed လမ်းအတွက်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ, ပါးစပ်လိင်အဖြစ်အင်္ဂါဇာတ်နှင့်စအိုထိုးဖောက်မှု, အဖြစ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများ, သရုပ်ဖော်ထားတဲ့ဓါတ်ပုံတွေပါဝင်သည်။2 soft-core နဲ့ခက်-Core ညစ်ညမ်းစမ်းသဘောခွဲခြားဆက်ဆံမှုလိုအပ်သည့်နှစ်မျိုးရှိပါသည်။ soft-Core ညစ်ညမ်းလိင်ရင်းနှီးသော pose အတွက်သုတ်သင်စုံတွဲများ၏ပုံဖော်တင်ဆက်ပါဝငျသညျ။ လိင်အင်္ဂါပေါ်တွင်အာရုံစိုက်ဒီ type အတွက်အနည်းငယ်မျှသာဖြစ်လိမ့်မည်။ ဆနျ့ကငျြ, ခက်-Core ညစ်ညမ်း, နာမည်အကြံပြုအဖြစ်, အခြားတစ်ဦးချင်း, လိင်တံ-In-လိင်အင်္ဂါထိုးဖောက်မှု, စအိုထိုးဖောက်မှု, ဒါမှမဟုတ်ပါးစပ်ဆွ၏ဆွပါဝငျသညျ။ သုတ်ရည်လွှတ်အပေါ်ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာအာရုံစိုက်ပေးခြင်း, အုပ်စုတစ်စုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများ, bestiality နှင့်ကလေးညစ်ညမ်းလည်းခဲယဉ်း-Core ညစ်ညမ်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။1 ညစ်ညမ်းကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းယဉ်ကျေးမှုများစွာအချို့ပုံစံသို့မဟုတ်အခြားထင်ရှားခဲ့သည်။ အငြင်းပွားဖွယ်ရာ၏ကြီးမြတ်သဘောတူညီချက်ညစ်ညမ်းနှင့်၎င်း၏စွဲနှင့်ဆက်စပ်သောအကျိုးဆက်များနှင့် ပတ်သက်. မေးခွန်းကိုဗဟိုပြု။ အချို့သောလေ့လာမှုတွေညစ်ညမ်းမှစွဲလမ်းသိသိသာသာ functional-လူမှုနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာချို့ယွင်းနှင့်ဆက်စပ်စေခြင်းငှါပြသခဲ့ကြသည်။ လေ့လာရေးအင်တာနက်စွဲအတွက်နောက်ခံအာရုံကြောဖြစ်စဉ်များပစ္စည်းဥစ္စာစွဲအလားတူဖြစ်ကြောင်းပြသခဲ့ကြသည်။ ဒါကြောင့်ပစ္စည်းဥစ္စာမှီခိုနှင့်အတူအလားတူအခြေခံယန္တရားမျှဝေအဖြစ်အင်တာနက်ကညစ်ညမ်းစွဲဒီအဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာမူဘောင်သို့ကိုက်ညီ။3
ကွဲပြားခြားနားသောအသုံးအနှုန်းများ၏နံပါတ်ထိုကဲ့သို့သော compulsive ကြည့်, ထကြွလွယ်သောမြင်ကွင်းနှင့် hypersexual ရောဂါအဖြစ်ပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုဖော်ပြရန်အသုံးပြုကြသည်ပေမယ့်,4 DSM-5 အဓိကအားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သက်သေအထောက်အထားများနှင့်ဤလယ်ကွင်းများတွင်လက်တွေ့သုတေသနများမရှိခြင်း၏အဓိပ္ပါယ်စံနှုန်းအဖြစ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲမပါဝင်ခဲ့ပါသည်။ ယခု DSM-5 ၏နောက်ဆက်တွဲတွင်ထည့်သွင်းသော "အင်တာနက်ကိုဂိမ်း Disorder" ကဲ့သို့အတည်ပြုသတ်မှတ်ချက်ကို အသုံးပြု. အဘယ်သူမျှမတနိုင်ငံလုံးကိုကိုယ်စားလှယ်ပျံ့နှံ့စစ်တမ်းများရှိခဲ့သည်။ သိသာထင်ရှားသောဒေတာသည်ကမ္ဘာ့အနှံ့ပျံ့နှံ့မှုနှုန်းသည်စံ၏ defining features တွေ, ယုံကြည်စိတ်ချခြင်းနှင့်တရားဝင်မှုနှင့် ပတ်သက်. ရရှိသောနှင့်, etiology နှင့်ဆက်စပ်နေသောဇီဝဗေဒ features တွေ၏အကဲဖြတ်နှင့် ပတ်သက်. ပြီသည်အထိလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲထည့်သွင်းမရပါ။ သုတေသီများဤအရပ်မှပင်လျှင်ညစ်ညမ်းစွဲယုံကြည်ကြသည်, သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုကျယ်ပြန့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲစကားပြော, နောက်ဆုံးမှာ DSM ၏အနာဂတ် edition မှာသို့လုပ်ထားခြင်းကြောင့်အင်တာနက်စွဲခြင်းရောဂါ၏အမျိုးအစားခွဲများတစ်ဦးထက်တစ်ဦးသီးခြားခွဲထွက်ကြလိမ့်မည်။5
ညစ်ညမ်းဖို့ Access ကိုလွယ်ကူသည်နှင့်မဂ္ဂဇင်းများအတွက်ပုံများ, ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဗွီဒီယိုများအပါအဝင်ပစ္စည်းမျိုးစုံကြောင့်များဝယ်ယူရန်အတွက်အနည်းငယ်မျှသာအားထုတ်မှုနှင့်အတူအများပြည်သူညစ်ညမ်းပြန်ဆို။ Videos မရှင်းလင်းပြတ်သားနှင့်အတူလိင်ဆက်ဆံခြင်းနှင့်အခြားလှုပ်ရှားမှုများပုံရိပ်တွေကိုပေး။ cable, လွင်ပြင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများနှင့်အတူပိတ်ထား-circuit ကိုရုပ်မြင်သံကြားစနစ်များကို floppy, CD-ROM များကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်ပင်ရုပ်ရှင်ကအရမ်းပေါ်ပြူလာဖြစ်လာကြပါပြီ။ နည်းပညာဆိုင်ရာတိုးတက်မှုတွေ၏စန်းပွမရှိစေရန်, အင်တာနက်ကိုအသုံးပြုပြီးညစ်ညမ်းရယူသုံးလူမျိုး၏နှုန်းမှာတစ်ဦးအကြီးကြီးထွားလည်းမရှိ။ ညစ်ညမ်းယောက်ျားလေးများလိင်အကြောင်းကိုသိကြများနှင့်၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်ချထားသော, စိတ်ကူးနှင့်အလိုဆန္ဒများကိုတစ်ဦးနားလည်မှုအောင်မြင်ရန်ရပထမဦးဆုံးဌာနဖြစ်ဟုဆိုသည်။ ယောက်ျားလေးများတစ်ဦးမှထွက်ရှိသောအရာကို၏အဓိပ္ပာယ်နှင့်သူတို့၏လိင်ပိုင်းအလိုဆန္ဒများတစ်ဂိတ်ဝေးများကဲ့သို့ပြုမူရဖို့စတင်ဖို့။6 အဆိုပါ MSNBC အားဖြင့် 2004 အတွက်ကောက်ယူတဲ့စစ်တမ်းမှာတော့နှင့် Elle မဂ္ဂဇင်း 15 246 ယောက်ျားမိန်းမတို့ကိုလေ့လာ: လူသုံးလေးသူတို့ကအင်တာနက်ကနေခေါ်ဆောင်သွားရုပ်ရှင်နှင့်ဗီဒီယိုများကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ခဲ့ကြောင်း, အမျိုးသမီးလူဦးရေရဲ့ 41% အဖြစ်ကောင်းစွာပြု၏။ ကျေနပ်လိင်ဘဝ, အဖက်ဖို့သစ်စာဖောကျမှု၏ခံစားမှုနှင့်ကိုယ်ကျင့်တရားယုံကြည်ချက်ချိုးဖောက်: သူတို့ညစ်ညမ်းရှောင်ကပြောကြားသည်သောသူတို့မူကားစိတ်မများအတွက်အောက်ပါအကြောင်းပြချက်ကိုးကား။ ညစ်ညမ်းဆယ်ကျော်သက်အစစ်အမှန်လောကရှိရင်ဆိုင်ရကြောင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ရတဲ့၏ရှုပ်ထွေးနေတဲ့ခိုလှုံရာကိုထောက်ပံ့ပေးကြောင်းရိုးရှင်းတဲ့လွယ်ကူခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားနေသည်။ အမျိုးသမီးတွေလည်းညစ်ညမ်းထံမှသင်ခန်းစာများအတွက်တာနှင့်အတူ, သူတို့ကအမှန်တကယ်လိင်ဘဝအသက်တာ၌သူတို့၏စိတ်ကူးယဉ်တည်ဆောက်လမ်းကိုအခြေခံကျကျပြောင်းလဲနေသည်။6 အတော်များများကလေ့လာမှုများဆယ်ကျော်သက်များနှင့်ညစ်ညမ်းစွဲနှင့် ပတ်သက်. ကမ္ဘာတစ်လွှားကောက်ယူခဲ့ကြသည်။ အင်တာနက်ကိုသူတို့ရှိသည် access ကိုမဆိုအခြားအလတ်စားနေဖြင့်ပွိုဖြစ်ပါတယ်။7 ထို့ကြောင့်ထို့နောက်နည်းပညာ advancements နှင့်အင်တာနက်များတိုးချဲ့နှစ်ဦးစလုံးအပြုသဘောနှင့်အဆိုးလူ့အဖွဲ့အစည်းမှလှူဒါန်းခဲ့ပါပြီ။ အင်တာနက်ကိုကဤမြီးကောင်ပေါက်များ၏ဘဝအသက်တာ၌အစားထိုးလို့မရတဲ့အရာဦးစားပေးဖြစ်ပါတယ်။ ညစ်ညမ်းအကြောင်းအရာအတွက်အမျိုးမျိုးနှင့်အသစ်အဆန်းတစ်ခုမကြုံစဖူးမြန်နှုန်းမှာကဤလူငယ်စောင့်ကြို။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ကောက်ယူလေ့လာမှုတစ်ခု 93 နှစ်ပေါင်းအားလုံးကိုမြီးကောင်ပေါက်အသက် 12 ၏ 17% ကအင်တာနက်အသုံးပြုပြသ; 63% နေ့စဉ်အွန်လိုင်းသွားနှင့် 36% အွန်လိုင်းအကြိမ်ပေါင်းများစွာတစ်ရက်ဖြစ်ကြသည်။ အင်တာနက်ဒါကမပြတ်မတောက် access ကိုအချို့သောအခြေအနေများတွင်အပြုသဘောနိုင်ပါတယ်; ဥပမာအားဖြင့်, အားလုံးအသက်အရွယ်မရွေးလူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပညာရေးနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေး, လူမှုရေးဆက်သွယ်မှု, အလုပ်နှင့်ဖျော်ဖြေရေးအပေါ်သတင်းအချက်အလက်ရရှိရန်။ သုတေသနလည်းမြီးကောင်ပေါက် compulsive ကအင်တာနက်အသုံးပြုမှုနှင့်အတူရုန်းကန်နေနှင့်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်ဘာနှင့်ဆက်စပ်သောအခြားအပြုအမူတွေဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြသည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းရန်မကြာခဏထိတွေ့ခြင်းဟာသူတို့ရဲ့လူမှုရေးအမြင်များနှင့်အဖြစ်မှန်ဆီသို့သဘောထားတခုတခုအပေါ်မှာသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သောပစ္စည်းရန်ထိတွေ့မှုပိုမိုသည် သာ. ကြီးမြတ်လိင်ဆီသို့မိမိတို့၏ဆာပသဘောထားတွေဖြစ်ပါတယ်။7
ညစ်ညမ်း၏ပိုလျှံကြည့်ရှုသူနဲ့ဆက်စပ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုလည်းအများကြီးအခြေအတင်ဆွေးနွေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ cross-section အွန်လိုင်းရိုအရှေ၏လေ့လာမှု, ဘှနှင့်ပေါ်တူဂီတို့သညျမှာ, အသီးသီး, ပျေါတူဂီနမူနာကနေနှင့် 40% နှင့်နော်ဝေနှင့်-Croatian နမူနာအနေဖြင့်ယောက်ျား၏ 57% အကြား 59% ယောက်ျား, အတော်ကြာညစ်ညမ်းသုံးပြီးခံရဖို့တွေ့ရှိခဲ့သည်ကြောင်းထင်ရှားလေ၏ အဆတစ်ပါတ်။ သင်တန်းသားများကို၏အကြောင်း 14.2% -28.3% erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု၏အစီရင်ခံ, 16.3% -37.4% hypoactive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု၏အစီရင်ခံနှင့် 6.2% -19.9% သုတ်ရည်လွှတ်နှောင့်နှေးခဲ့ရတယ်။8 ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှပထမမြို့တော်တက္ကသိုလ်မှဘွဲ့ကြိုကျောင်းသား ၂၉၉ ဦး (အမျိုးသား ၇၀.၆ ရာခိုင်နှုန်း) တွင်ပြုလုပ်ထားသောလေ့လာမှုတစ်ခုအရစနစ်တကျမေးမြန်းထားသောမေးခွန်းပုံစံဖြင့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့သည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းသည်ညဥ့်နက်သန်းခေါင်အချိန်တွင်သူငယ်ချင်းများနှင့်စုဝေးခဲ့ကြသောကျောင်းသားများအကြား ၅၈.၄% ရှိသည်။ ထို့အပြင်သူတို့၏သူငယ်ချင်းများနှင့်မကြာခဏအငြင်းပွားမှုများသို့မဟုတ်ရန်ဖြစ်လေ့ရှိသူများ၊ သူငယ်ချင်းများနှင့်အချိန်ဖြုန်းခြင်းနှင့်အိပ်ရာမ ၀ င်သူများသည်အပြာစာပေရုပ်ပုံများကိုပိုမိုသုံးစွဲကြောင်းတင်ပြကြသည်။ ဒီလေ့လာမှုကအွန်လိုင်းညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသုံးစွဲမှုကိုခြုံငုံဖော်ပြသည်။ ယောက်ျားလေးကျောင်းသားများ၏သိသာထင်ရှားသောအချိုးအစားမှာမိန်းမများထက်လိင်အင်္ဂါပစ္စည်းများပိုမိုသုံးစွဲသည်။ ထိုကဲ့သို့သောအပြုအမူများသည်ကျောင်းသားများနှင့်လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလုံးအပေါ်လေ့လာမှုများ၊ ပညာရေးရလဒ်များအပြင်လူမှုရေးနှင့်ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာပိုမိုကျယ်ပြန့်သောသက်ရောက်မှုများရှိနိုင်သည်။ ထိုကဲ့သို့သောကျောင်းသားများသည်လေ့လာမှုအပေါ်အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်အချိန်မီအိပ်ရာမ ၀ င်နိုင်ခြင်းကိုလည်းတွေ့မြင်ခဲ့ရသည်။ ယင်းသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေစွဲလမ်းစေသောသဘောသဘာဝနှင့်လည်းဆက်နွယ်နေနိုင်သည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသည် ဦး နှောက်၏အပျော်အပါးစင်တာများကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ရန်နှင့်တည်ဆောက်ပုံနှင့်လုပ်ဆောင်မှုကိုပြောင်းလဲစေနိုင်သောစိတ်ကူးယဉ်ဆန်သောဖော်ပြချက်ဖြစ်သည်ဟုဆိုကြသည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာကြည့်ခြင်းက ဦး နှောက်၏ဆုလာဘ်စနစ်ကိုပြင်းထန်စွာလှုံ့ဆော်ပေးနိုင်သည်။ ၎င်းသည် ဦး နှောက်တွင်သိသိသာသာပြောင်းလဲမှုများဖြစ်ပေါ်စေပြီးမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုတွင်တွေ့မြင်နိုင်သည်။9
လူမှုရေးနှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်များလိင်ရန်လိုညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့်၏သက်ရောက်မှုနှင့် ပတ်သက်. အလေးအနက်စိုးရိမ်ပူပန်မှုများဖော်ပြ။ 1996 အတွက် Bausserman ခက်ခဲ-Core ညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြစ်မှုများအကြားဆက်ဆံရေးရှာဖွေစူးစမ်းသုတေသနပြန်လည်သုံးသပ်။ ဒါကြောင့်အကြမ်းဖက်မှုနှင့်ချေမှုန်းရေးဟာတရားမျှတသည်ဟုမထင်ဖို့ကြည့်ရှုဦးဆောင်အဖြစ်ပြင်းထန်တဲ့လိင်ဆက်ဆံ၏လက်ခံသူများများ၏တုံ့ပြန်မှုကိုလည်းစိုးရိမ်စရာဖြစ်ပါတယ်။1 အထီးဆွီဒင်အထက်တန်းကျောင်းကျောင်းသားတစ်ဦးမကြာသေးခင်ကလေ့လာမှုမှာ Svedin et al (N = 2015) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းမကြာခဏအထီးကြည့်ရှုမှာအားလုံးလျော့နည်းမကြာခဏသို့မဟုတ်မညစ်ညမ်းကြည့်ရှုအားပေးတဲ့သူတွေကိုထက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းဆီသို့ပိုပြီးလစ်ဘရယ်သို့မဟုတ်အပြုသဘောဆောင်သဘောထားများရှိခဲ့ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါလေ့လာမှုလည်းပိုပြီးမကြာခဏလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းကြည့်ရှုအားပေးတဲ့သူတွေကိုထိုကဲ့သို့သောပစ္စည်းသုံးပြီးသူတို့အားစားသုံးသူများအတွက်ပိုမိုလှုံ့ဆော်လိင်ဘဝကိုဖန်တီးနိုင်ဟုယုံကြည်ကြောင်းမီးမောင်းထိုးပြ။10
မြီးကောင်ပေါက် '' လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းမှထိတွေ့မှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွက်အဆက်မပြတ်ကြားဆက်ဆံရေးတစ်ခါတစ်ရံတွင်အခြားအတှေးအများ၏ဖယ်မှာ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စများအတွက်ခိုင်မာတဲ့သိမြင်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုအဖြစ်သတ်မှတ်ထားသည်။ ပေတရုနှင့် Valkenburg 962 ယခုနှစ်သင်တန်းကျော် 1 ဒတျချြမြီးကောင်ပေါက်သုံးကြိမ်စစ်တမ်းကောက်ယူနှင့်ပိုပြီးမကြာခဏ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအင်တာနက်ကရုပ်ရှင်တွေကိုအသုံးပြု adolescents ပိုမကြာခဏသူတို့လိင်စဉ်းစား, လိင်အတွက်အားကောင်းမိမိတို့၏အကျိုးစီးပွားဖြစ်လာခဲ့သည်, နှင့်ပိုပြီးမကြာခဏသူတို့ဖြစ်လာခဲ့သည်တွေ့ရှိခဲ့ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လိင်နှင့် ပတ်သက်. အတှေးအများ၏အာရုံ။11 Haggstrom-Nordin et al အားဖြင့်လေ့လာရေး12 Kraus နှင့်စယ်ခြင်းနှင့်13 လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းစောစောထိတွေ့ယောက်ျားနှင့်မိန်းမဦးမြီးကောင်ပေါက်နှစ်ခုလုံးကိုအစောပိုင်းက၎င်းတို့၏ Non-ထိတွေ့ရွယ်တူချင်းထက်ပါးစပ်လိင်နှင့်လိင်ဆက်ဆံမှုအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံမည်ဟူသောဖြစ်နိုင်ခြေကိုတိုးပွါးကြောင်းအကြံပြုခဲ့သည်။ 2009 အတွက်ဘရောင်းနှင့်သည် L'Engle ရဲ့လေ့လာမှုသည်ဤအစောပိုင်းကလေ့လာမှုများ၏တွေ့ရှိချက်များကိုထောက်ခံခဲ့ကြသည်။14 ဆိုက်ဘာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလူကြီးများအတွက်ကောင်းစွာဖြစ်ခြင်းစဉ်က Marie-ဆိပ်ခံတံတားနှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များအပန်းဖြေအသုံးပြုသူများကိုပိုမိုမြင့်မားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုနှင့်အနိမ့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive, ရှောင်ရှားခြင်းနှင့်ကမောက်ကမဖြစ်မှုအစီရင်ခံကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, compulsive အသုံးပြုသူများကိုပိုမိုမြင့်မားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive နှင့်ရှောင်ရှားခြင်းနှင့်အတူအနိမ့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုနှင့်ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်အတူပေးအပ်သည်။15
အင်တာနက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသည်ပြန့်ပွားသောအသုံးပြုမှုနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကိုတောင့်တရန်လွယ်ကူစေသောမီဒီယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ သုတေသနပြုချက်အရအချို့သောသိမြင်မှုနှင့်သတင်းအချက်အလက်အပြောင်းအလဲသည်အလိုဆန္ဒနှင့် metacognition ကဲ့သို့သောစွဲလမ်းစေသောအပြုအမူများတွင်တဏှာ၏တက်ကြွမှုနှင့်မြင့်တက်မှုတို့အတွက်အဓိကကျသည်။ အများအပြားလေ့လာမှုများပြproblemနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုတစ်ခု metacognitive conceptualization ၏လက်တွေ့တန်ဖိုးကိုပြသခဲ့ကြသည်။ ဤရွေ့ကား metacognitive ဖြစ်စဉ်များစူးစမ်းဖို့ရှိသည်နှင့်ဤအသစ်သောကုသမှုနှင့် relapse ကာကွယ်တားဆီးရေးမဟာဗျူဟာ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုကူညီလိမ့်မည်။16
အိန္ဒိယမြင်ကွင်းနှင့်ပတ်သက်လျှင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်၎င်း၏ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ သုတေသနပြုမှုနည်းပါးသည်။ ဒါ့အပြင်အိန္ဒိယမှာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေအကြောင်းအရာများနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြတ်သားတဲ့ဥပဒေမရှိဘူး။ ညစ်ညမ်းမှုကိုသီးသန့်ထားခြင်းသည်ရာဇဝတ်မှုမဟုတ်ပါ; သို့သော်ကလေးသူငယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှုပုံများသိမ်းဆည်းခြင်းသို့မဟုတ်ထုတ်ဝေခြင်းတို့ကိုအပြစ်ပေးနိုင်သည်။ သို့သော် ၂၀၁၅ ခုနှစ်ဇူလိုင်လ မှစ၍ အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကြည့်ရှုခြင်းအပေါ်အစိုးရ၏ချဉ်းကပ်မှုအပြောင်းအလဲရှိသည်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်ဇူလိုင်လတွင်အိန္ဒိယအစိုးရမှ site ၈၅၇ ခုကိုပိတ်ပင်ရန်အမိန့်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ လက်ရှိတွင်အိန္ဒိယအစိုးရသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်ဆိုင်သောစစ်ပွဲတွင်ပြန်လည်အားဖြည့်နေပြီးဆက်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီများနှင့်အင်တာနက် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူ (ISPs) များအား ၂၀၁၈ ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလတွင်၎င်းတို့၏ကွန်ရက်များမှလူပေါင်း ၈၂၇ ခုအားတားမြစ်ရန်အမိန့်ပေးခဲ့သည်။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူပါဝင်သောအကြောင်းအရာများပါ ၀ င်သောကွန်ရက်စာမျက်နှာ ၈၅၇ ခုရှိသည်။ ၂၀၁၅ တွင်ထုတ်ပြန်ခဲ့သောအမိန့်နှင့်ဆင်တူသည်။ သို့သော်စစ်ဆေးမှုအရအီလက်ထရောနစ်နှင့်သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာ ၀ န်ကြီးဌာနမှ၎င်းတို့အနက် ၃၀ သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုခြင်းမရှိသည့်အတွက်ထိုစာရင်းကိုအညီလိုက်သည်။
မြီးကောင်ပေါက်များကအင်တာနက်ကိုတိုးမြှင့်ရရှိမှုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပညာရေး, သင်ကြားရေးနှင့်စီးပွားရေးတိုးတက်မှုတို့အတွက်မကြုံစဖူးအခွင့်အလမ်းများကိုဖန်တီးထားသည်။ ပြောင်းပြန်ကလည်းအကြိမ်ကြိမ်အကျိုးကိုအားဖြည့်ထားတဲ့အမျိုးမျိုးသောအပြုအမူများပေါ်ပေါက်လာရန်ဦးဆောင်တော်မူပြီ လှုံ့ဆျောမှုနှင့်မှတ်ဉာဏ် circuitry စွဲ၏ရောဂါရှိသမျှတို့ကိုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ပါသည်။ တစ်ခုမှာထိုကဲ့သို့သောအပြုအမူစွဲညစ်ညမ်းဘို့ဖြစ်ပါတယ်။ သုတေသန, အင်တာနက်ပေါ်မှာတွေ့ရှိခဲ့ကြောင်းအထူးသဖြင့်ညစ်ညမ်းကိုအသုံးပြုဖို့သူအမြီးကောင်ပေါက်, လူမှုရေးပေါင်းစည်းမှု၏အနိမ့်ဒီဂရီရှိသည်အကြံပြုအကငျြ့ပြဿနာများ, ဆိုးသွမ်းအပြုအမူများပိုမိုမြင့်မားအဆင့်ဆင့်, စိတ်ကျရောဂါလက္ခဏာတွေမြင့်မားဖြစ်ပွားမှုများတွင်တိုးနှင့်စောင့်ရှောက်သူများနှင့်အတူစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ Bond လျော့နည်းသွားသည်။ ရှေ့ဆက် Going ကျနော်တို့သုတေသနပြုဘို့ငါတို့မူဘောင်ရိုးရှင်းဆက်စပ်မှုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနှင့် Cross-Section ဒီဇိုင်းများကျော်လွန်ရွှေ့ကြောင်းပိုမိုခေတ်မီနည်းစနစ်ထည့်သွင်းကြောင်းတဦးတည်းအပျေါမှာတညျဆောကျဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဥပမာ, variable တွေကိုဖြန်ဖြေခြင်းနှင့်စိစစ်အကဲဖြတ်အဖြစ်ကြောင်းကျိုးဆက်စပ်ဆိုးကျိုးများလေ့လာမှုများအသိပညာ၏လက်ရှိခန္ဓာကိုယ်မှသိသိသာသာကိုထည့်သွင်းပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါ themes များ, အကြောင်းအရာနှင့်ညစ်ညမ်းအတွက်ပုံဖော်မက်ဆေ့ခ်ျများနှင့်ပတ်သက်ပြီး သာ. ကြီးမြတ်တိကျတဲ့၏ပါဝင်မှုလိုအပ်နှင့်ထိုကဲ့သို့သောလေ့လာမှုများထက် သာ. ကြီးမြတ်သောအတိမ်အနက်နှင့်ကြွယ်ဝသောဒေတာများသတင်းရင်းမြစ်ပူဇော်ကြောင်းအရည်အသွေးနည်းစနစ်များ အသုံးပြု. ကောက်ယူနိုင်ပါသည်။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက်ကြီးမားဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲများကိုပေးထားအနာဂတ်သုတေသနညစ်ညမ်း၏မြီးကောင်ပေါက် '' အသုံးပြုမှုအပေါ်တစ်ဦးဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာရှုထောင့်ကိုလိုက်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့သောငယ်ရွယ်လူကြီးများကဲ့သို့အခြားအသက်အရွယ်အုပ်စုများနှင့်အတူနှိုင်းယှဉ်အလွန်မြီးကောင်ပေါက် '' ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနှင့်၎င်း၏ဂယက်ကဒီအသက်အရွယ်အုပ်စုသတ်သတ်မှတ်မှတ်ဖြစ်သို့မဟုတ်အဖြစ်ကောင်းစွာနဲ့အခြားအသက်အရွယ်အုပ်စုများမှလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်ရှိမရှိနှင့် ပတ်သက်. ကျွန်ုပ်တို့၏အသိပညာတိုးစေနိုင်သည်။ ဒါဟာအစကျား, မ, ယဉ်ကျေးမှုအချက်များ, လူနည်းစုအခြေအနေ, နှင့်ထိုကဲ့သို့သောလိင်တူချစ်သူ, လိင်တူချစ်သူ, ရိုးရိုးနှင့်ဖက်လိင်မြီးကောင်ပေါက်အဖြစ်ခွဲလူဦးရေနှင့်သက်ဆိုင်သည့်ကွဲပြားမှုပိုမိုနားလည်မှုကိုထောက်ပံ့ပေးကြောင်းသုတေသနပြုရန်လိုအပ်သောဖြစ်လိမ့်မည်။
ဒီဒစ်ဂျစ်တယ်ခေတ်မှာတော့နည်းပညာအင်တာနက် access ကိုတိုးမြှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာ၌ရှိသမျှသောအသှငျအပွငျကျူးကျော်ခဲ့သည်။ ဒါကြောင့်ညစ်ညမ်း၏ဆိုးရွားသောသက်ရောက်မှုများနှင့် ပတ်သက်. ကျောင်းသားကျောင်းသူများပညာပေးရန်အထူးဒီဇိုင်းညစ်ညမ်းစွဲပညာရေးအစီအစဉ်များကိုပေးအလွန်အရေးကြီးသည်။ ထို့အပြင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးမှုနှင့်ညစ်ညမ်းအလွဲသုံးစားမှုများအတွက်ပစ်မှတ်ထားကုသမှုအစီအစဉ်များကိုညစ်ညမ်းစွဲနေသောတစ်ဦးချင်းစီကိုထောကျပံ့ဖို့လိုအပ်နေပါသည်။
စာရေးသူဤဆောင်းပါး၏သုတေသန, ရေးသားခဲ့သောနှင့် / သို့မဟုတ်ထုတ်ဝေဖို့လေးစားမှုနှင့်အတူအကျိုးစီးပွားမျှအလားအလာပဋိပက္ခများကိုကြေညာခဲ့ပါတယ်။
စာရေးသူဤဆောင်းပါး၏သုတေသန, ရေးသားခဲ့သောနှင့် / သို့မဟုတ်ထုတ်ဝေရန်အဘယ်သူမျှမဘဏ္ဍာရေးထောက်ပံ့မှုကိုရရှိခဲ့သည်။
Westheimer, R. လူ့လိင်: တစ်ဦးကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအမြင်။ ed 2nd ။ Baltimore: Lippincott Williams & Wilkins; 2005: 719-723.
ပေတရု, J ကို, Valkenburg, လေး။ မြီးကောင်ပေါက်နှင့်ညစ်ညမ်း: သုတေသန 20 နှစ်ပေါင်းတစ်ဦးကသုံးသပ်မှု. J ကိုလိင် Res. 2016။ Doi: 10.1080 / 00224499.2016.1143441 ။
Darshan, MS, Sathyanarayana Rao က, TS, Manickam, S, Tandon, တစ်ဦးက, Ram, ဃ Dhat syndrome ရောဂါနှင့်အတူညစ်ညမ်းစွဲ၏တစ်ဦးအမှုအစီရင်ခံစာ. အိန္ဒိယ J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု. 2014; 56:385-387.
Duffy, တစ်ဦးက, Dawson, DL ။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူများတွင်ညစ်ညမ်းစွဲ: အဓိပ္ပာယ်နှင့်အစီရင်ခံသက်ရောက်မှုတစ်ခုစနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်မှု. J ကိုလိင် Med. 2016; 13:760-777.
Griffiths က, အမ် အဘယ်ကြောင့် DSM-5 အတွက်လိင်စွဲမဟုတ်ပါဘူး. စွဲကျွမ်းကျင်သူများကဘလော့။ မတ်လ 2015.
ပေါလုသည်: P ။ Pornified: ဘယ်လိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံကျွန်မတို့ရဲ့အသက်တာ, ကျွန်ုပ်တို့၏ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏မိသားစုများမထိခိုက်စေလျက်ရှိသည်။ 1st ed ။ နယူးယောက်, နယူးယော့: ဇီးကွက်စာအုပ်; 2006:19-75.
မစ်ချယ်, KJ, Wolak, ဂျေ, Finkelhor, ဃ လူငယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမြှူဆွယ်တောင်းခံ၏အစီရင်ခံစာများ, နှောင့်ယှက်ခြင်းနှင့်အင်တာနက်ပေါ်ရှိညစ်ညမ်းမှမလိုချင်တဲ့ထိတွေ့မှုအတွက်ခေတ်ရေစီးကြောင်း. J ကိုမြီးကောင်ပေါက်ကနျြးမာရေး. 2007; 40:116-126.
Landripet, ငါ Stulhofer, အေ ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုအသက်အရွယ်နုပျိုသောလိင်ကွဲလူတို့တွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအခက်အခဲများနှင့်အလုပ်မဖြစ်နှင့်ဆက်စပ်နေသည်? J ကိုလိင် Med. 2015; 12:1136-1139.
ချောင်ဒရီ, MRHK, ချောင်ဒရီ, MRK, Kabir, R ကို, Perera, NKP, Kader, အမ် အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းအတွက်စွဲလမ်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အတွက်တက်ရောက်ပုဂ္ဂလိကတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများ၏အပြုအမူပုံစံကိုအကျိုးသက်ရောက်ပါသလား? int J ကိုကနျြးမာရေးသိပ္ပံ (Qassim). 2018; 12 (3):67-74.
Svedin, C, Åkerman, ငါ Priebe, G. အ ညစ်ညမ်း၏မကြာခဏအသုံးပြုသူများသည်: ဆွီဒင်အထီးမြီးကောင်ပေါက်များ၏လူဦးရေကိုအခြေခံပြီး epidemiological လေ့လာမှု. J ကိုမြီးကောင်ပေါက်. 2011; 34 (4):779-788။ Doi: 10.1016 / j.adolescence.2010.04.010 ။
Owen, အီး, Beuhn, R ကို, Manning, ဂျေ, ရိဒ်, R. မြီးကောင်ပေါက်အင်တာနက်ညစ်ညမ်း၏သက်ရောက်မှု: အသုတေသနတစ်ဦးကသုံးသပ်မှု. လိင်စွဲလမ်း compulsive. 2012; 19:99-122။ Doi: 10.1080 / 10720162.2012.66043 / ။
Haggstrom, N ကို, Hanson, U. ဆွီဒင်နိုင်ငံတွင်မြီးကောင်ပေါက်အကြားညစ်ညမ်းစားသုံးမှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်အကြားအစည်းအရုံး. int J ကို STD AIDS ရောဂါ။ ဖေဖေါ်ဝါရီလ 2005; 16 (2):102-107.
Kraus, SW, စယ်, B. အစောပိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံများ: အဆိုပါအင်တာနက်များ၏အခန်းကဏ္ဍနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်း. Cyberpsychol ပြုမူနေ. 2008; 11:162-168။ Doi: 10.1089 / cpb.2007.0054 ။
ဘရောင်း, JD, L'Engle, KL ။ X-rated: အမေရိကန်နှင့်အတူဆက်နွယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောထားများနှင့်အပြုအမူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာဆက်သွယ်ရေးသုတေသနစောစောမြီးကောင်ပေါက် '' ထိတွေ့မှု. ဂျေသက်ကြီးရွယ်အိုများစိတ်ရောဂါကုသမှု Neurology. 2009; 36 (1):129-151.
Alexis, EM, Burgess, AW, Prentky, RA ။ လိင်ကတုံ့ပြန်ကလေးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်အကြားအပြုအမူတစ်ခုရန်လိုပုံစံများအတွက်အန္တရာယ်အမှတ်အသားအဖြစ်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု. J ကို Am Psychiatric သူနာပြုများ Assoc။ ဇန္နဝါရီလ 2009; 14 (6):442-453.
Allen က, တစ်ဦးက, Kannis-Dymand, L, Katsikitis, M က ပြဿနာကအင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု: တဏှာ, အလိုဆန္ဒအတှေးအချေါမြားနှငျ့ metacognition များ၏အခန်းကဏ္ဍ. စှဲလမျးသူပြုမူနေ။ ဇူလိုင်လ 2017; 70:65-71.